IINKCUKACHA: UMartin Vrijland
Ngubani uMartin Vrijland kwaye kutheni ehlala ekhuthele ukubhala amanqaku? Kwimihlathi embalwa ndachaza ukuba ezinye izinto eziseNetherlands zilawulwa ngokupheleleyo. Ndijolise ngokwenene ukuba 'ndilawulwe yinkonzo yamfihlo.' E-Netherlands, iqela libizwa ngokuba ngu-AIVD. Ukuze ukwazi ukubonisa ukuba, ngokwenene kufuneka ungene ngaphakathi. Oko [...]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	1 Aprili 2020	• 40 Comments
Ngaphandle koloyiko olukhulu eluntwini kunye nenani elikhulu lezinto ezisasazekayo ezisasazeke kuyo yonke indawo, ukuze abantu bangasaboni hlathi emithini kwaye baqhutywa ngobuchule babuyela “kwiingcali” zeendaba zosasazo nezepolitiki, ndingathanda ukuba ndinibize yenza utshintsho oluqinisekileyo. Oko kuzama kubonakala […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	1 Aprili 2020	• 23 Comments
UTom Barnett uthi ngugqirha opheleleyo. Wafunda isayensi ye-biomedical ngaphambi kokungena kwiimfundiso zonyango lwendalo, isondlo, iphysotherapy, imeko ekumgangatho ophezulu kunye neengqondo. Uphulukene noninzi lwayo lwama-XNUMXs kunye nama-XNUMXs ngenxa yogonyo kunye nokonakala komtshato kwaye uye wanomdla kwilungelo lethu lokungena ngaphakathi okunempilo […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	31 Matshi 2020	• 26 Comments
Kwangoko ndicacisa ukuba kujongeka ngathi u-An Anon ngumnatha wokhuseleko wabantu ababona ukuba kukhona okuqhubekayo ngentsholongwane ye-corona (jonga apha nalapha). Igama 'uQ' lifana kakhulu nokufutshane kumgca okanye umgca okanye umgca; uya […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	30 Matshi 2020	• 4 Comments
"IJamani ifuna ukukhulisa i-app kwisithuba esifutshane esigcina ukuba ngubani umntu onxibelelana naye i-smartphone, inikela ingxelo iReuters ngoMvulo. Eli lizwe lilandela emanyathelweni eSwitzerland. Uhlelo lokusebenza lweSwitzerland lubhalisa ngeBluetooth xa i-smartphone ikufowna. Ukuba umnini we-smartphone une-coronavirus […]
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.368.857